Mafia: Definitive Edition ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ PC တွင်အကောင်းဆုံး mafia ဂိမ်းကိုရရှိလိမ့်မည်။ Mafia: Definitive Edition သည်လှုပ်ရှားမှုစွန့်စားမှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Hangar 13 မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး 2K မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Mafia ၏ဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မေလတွင်ကြေငြာခဲ့သည် Mafia: Definitive...
Assassins Creed Odyssey ကို Steam တွင် ၀ ယ်ယူပြီး Windows တွင်ကစားနိုင်သည်။ Assassin ၏ Creed စီးရီးသည်ခဏတာအနားယူပြီးနောက် Assassins Creed: Origins ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ရှေးအီဂျစ်အချိန်ကာလ၌ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အတူအချို့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများသည်စီးရီးသို့ရောက်လာပြီးကစားသမားများသည်အပြောင်းအလဲကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ Ubisoft...
Assassins Creed Valhalla ကို Download လုပ်၍ Ubisoft ဖန်တီးသောစွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာသို့ခြေလှမ်းလှမ်းပါ။ Ubisoft Montreal တွင် Assassin ၏ Creed Black Flag နှင့် Assassins Creed Origins နောက်ကွယ်မှအဖွဲ့သည်တီထွင်ထားသော Assassins Creed Valhalla သည်ကစားသမားများကိုဖိတ်ကြားထားသည့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဗိုက်ကင်းဗိုက်ကင်းတိုက်ခိုက်ရေးသမား...
Android platform အတွက် Bravo ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ခဲ့သော Forces of Freedom သည်အစောပိုင်း Access Game တစ်ခုဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကိုနှစ်သက်သည်။ မိုဘိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းများတွင်ပါဝင်သည့်အင်အားစုများ၏လွတ်လပ်ခွင့် Forces ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုတွင်အလွန်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများရှိသည်၊...
Detroit: Become Human သည် Quantic Dream မှတီထွင်ထားသောလှုပ်ရှားမှု - စွန့်စားခန်း၊ Sony ထုတ်ဝေသော PS4 ဂိမ်းသည် PC platform ရှိ Epic Games Store တွင်ပေါ်လာသည်။ ဂိမ်းထဲမှာမင်းပေးတဲ့ပမာဏဟာလူတွေလိုစကားပြော၊ ပြုမူ၊ ပြုမူပြောဆိုနိုင်တဲ့ androids...
Counter-Strike ၁.၆ သည် Counter-Strike စီးရီး၏အကျော်ကြားဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် Half-Life mod အနေဖြင့်သူ၏ဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလမ်းအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Half-Life ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Valve မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းထားသည့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဤအကဲဖြတ်မှုကိုကစားသမားများသည်...
Resident Evil Village သည် Capcom မှတီထွင်ခဲ့သောရှင်သန်ရန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ Resident Evil စီးရီးတွင်အeight္ဌမမြောက်အဓိကအပိုင်းဖြစ်သော Resident Evil Village သည် Resident House 7: Biohazard ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ Resident Evil Village ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကစားသမားများနှင့်တွေ့ဆုံမည် Resident Evil Village ကို download လုပ်ပါ...
Halo4သည် XPS 360 ဂိမ်း console ပြီးနောက် PC platform ပေါ်တွင်ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ၃၄၃ Industries မှတီထွင်ခဲ့ပြီးမိုက်ခရိုဆော့ဖ်စတူဒီယိုမှထုတ်ဝေသည်။ ပထမဆုံးလူသေနတ်သမားသည်နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ တွင် Xbox 360 console တွင်ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ Halo franchise တွင်စတုတ္ထနှင့်သတ္တမမြောက်အပိုင်းကိုယခုကွန်ပျူတာများတွင်ဖွင့်နိုင်သည်။ Halo4ဂိမ်းကို Steam မှ ၀...
Hitman3သည် Hitman စီးရီး၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်၊ သူသည်ကိုယ်ပျောက်နှင့်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းဂိမ်းများတွင်စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသည့်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ IO Interactive မှဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Hitman3ကိုမျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းစက်များမှ PlayStation5နှင့် Xbox Series S တို့ကဲ့သို့ ၀ င်းဒိုးဂိမ်းများမှကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်။ အသစ်သော...
Hades သည် SuperGiant Games မှထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်ဝေသော roguelike action-role-playing game ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် PC ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော rpg ဂိမ်း၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရမှတ်များမှာအတော်အတန်မြင့်ပြီး ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းများတွင်ပါဝင်သည်။ သငျသညျ Action rpg ဂိမ်းများကိုနှစ်သက်လျှင်အထက်ရှိ Hades Download ခလုတ်ကို နှိပ်၍...
Medal of Honor: Respawn ဖျော်ဖြေရေးမှတီထွင်ခဲ့သောပထမဆုံးလူသေနတ်သမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ PC II တွင်အများဆုံးကစားသည့် FPS ဂိမ်းစီးရီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဥရောပ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဂိမ်းထဲမှာ, သင်ကပြင်သစ်ခုခံအတွက် OSS သူလျှိုနှင့်စစ်သည်တော်အစားထိုးလိုက်ပါ။...
Sniper Ghost Warrior Contracts2သည် CI Games မှထုတ်လုပ်သည့် sniper ဂိမ်းဖြစ်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌တပ်ဆင်ထားသောခေတ်သစ်စစ်ပွဲ - စနိုက်ပါ SGW ကန်ထရိုက် ၂ တွင်သင်သည် Reaper အမည်ရှိစနိုက်ပါကိုအစားထိုး။ အကွာအဝေးများစွာမှလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကစားသမားမစ်ရှင်များစတင်ရန်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Download Sniper...
Prince Of Persia: Sands of Time Remake သည်အနည်းငယ်သာပဟေwithိဆန်သောလှုပ်ရှားမှုစွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သော Sands of Time trilogy ၏ပထမဆုံးဂိမ်းသည်၎င်း၏မူလဇာတ်လမ်းနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ပုံရိပ်အသစ်များပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပါရှားမင်းသားအနေနှင့်မင်းရဲ့နိုင်ငံတော်အားသစ္စာမဲ့ Vizier...
EBOLA2သည်ရှင်သန်မှုထိတ်လန့်မှုကိုဂန္ထဝင်မှုတ်သွင်းပေးသော PC ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်သူမှ Steam တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောဂိမ်းတွင်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသောကင်မရာ၏အဓိကဇာတ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သင်ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ထဲတွင်ရှိနေသည်ဟုခံစားရစေသည်။ အကယ်၍ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောဂိမ်းများ၊...
Hamachi သည်အသုံးပြုသူများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်လုံခြုံသော virtual networks များကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အသုံးဝင်သော network technology solution ဖြစ်ပြီး၊ network connection တစ်ခုတည်းတွင်သာရှိသည်ဟုဟန်ဆောင်သည်။ သင်၏ပရိုဂရမ်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပထမအကြိမ် install လုပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုဖွင့်ရန်ခဏကြာပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်စိတ်မပူပါနှင့်၊...
Advanced SystemCare Ultimate သည်စွမ်းအားပြည့်ပြီးပြည့်စုံသော PC လုံခြုံရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့်မြန်ဆန်စေခြင်းအပြင်သင်၏ system အားဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ransomware နှင့်အခြား malware များမှကာကွယ်ပေးသည်။ Advanced SystemCare Ultimate 13...
CPU-Z သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပရိုဆက်ဆာ၊ Motherboard နှင့်မှတ်ဉာဏ်အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသည့်အခမဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ download လုပ်ပါ CPU-Z ကို သင်၏ပရိုဆက်ဆာ၏အမြန်နှုန်း၊ အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပလည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း၊ အမျိုးအစား၊ ပုံစံ၊ cache အချက်အလက်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ core ဗို့၊ မြှောက်ကိန်းများ၊ chipset (မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တံတား)...
SMPlayer သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်သည့်အထင်ရှားဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်မှုများစွာဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်။...
MiniTool Photo Recovery ဆိုသည်မှာမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုသင်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ (သို့) ကွန်ပျူတာမှဖျက်လိုက်သည့်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောဖိုင်ပြန်လည်ဆယ်တင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MiniTool Photo Recovery သည်သင်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍...
PC Win Booster သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုစကင်ဖတ်ရန်၊ ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်အမှိုက်ပုံးများကိုဖျက်ပစ်ရန်အောင်မြင်သောစနစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်သင့်အတွက်အသုံးမ ၀ င်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ အသုံးမပြုသောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်၏ Windows operating...
EaseUS Partition Master Free သည် HDDs၊ SSDs, USB drives, memory card နှင့်အခြားဖြုတ်တပ်နိုင်သောပစ္စည်းများကိုခွဲထုတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ EaseUS Partition Master Free သည် Windows XP မှ Windows 10 သို့လည်ပတ်နေသည့် operating system အားလုံးတွင်ကွန်ပျူတာများအားလုံးတွင် hard နှင့် external disk...
IsoBuster သည် hardware သတ်မှတ်ချက်များနည်းပါးသော CD, DVD, BD နှင့် HD DVD data recovery software ဖြစ်သည်။ အားလုံး system ဖိုင်များထောက်ခံနေကြသည်။ သင်ပျောက်ထားသောဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည် CD, DVD, BD နှင့် HD DVD များကိုလည်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ သတ်မှတ်ထားသောပုံစံများ မှလွဲ၍ ပရိုဂရမ်သည် optical disc...
GameGain သည်သင့်ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပိုမိုအဆင်ပြေသောဂိမ်းများကိုကစားနိုင်စေရန်အကောင်းဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်၍ တီထွင်ခဲ့သော GameGain နှင့်သင်ယခုသင့်ကွန်ပျူတာကိုမတင်းကြပ်စေဘဲသင်၏ဂိမ်းများကိုကစားနိုင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍...
Text Editor Pro သည်အစွမ်းထက်သောစာသားတည်းဖြတ်ခြင်းကိရိယာဖြစ်ပြီးဘာသာစကားများနှင့် scripts များအတွက် syntax ကိုမီးမောင်းထိုးပြပေးသည်။ Text Editor Pro (ယခင် EditBone) သည် ၁၀၀ ကျော်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောအရေခွံ ၁၀၀ ကျော်၊ ယူနီကုတ်အက္ခရာမြေပုံ၊ ဂဏန်းယူနစ်ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာ၊ SQL...
KingRoot သည် Windows PC နှင့် Android ဖုန်းအသုံးပြုသူအနေဖြင့်သင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံး rooting program တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထုတ်လုပ်သူမှချမှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များကိုဖယ်ရှားလိုပါကသင်၏ Android စက်ကိုလွတ်လပ်စွာသုံးပါ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲနောက်ဆုံးပေါ် Android version ကို install...
Advanced Renamer သည်ဖိုင်များစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်နာမည်ပြောင်းရန် Windows application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပရိုဂရမ်သည်၎င်းကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောသန့်ရှင်းသော interface ကြောင့်သင်၏ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါများအားသင်လိုချင်သောဖိုင်တွဲအတွင်းသို့အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ ...
CCleaner ဆိုသည်မှာကွန်ပျူတာသန့်ရှင်းရေး၊ ကွန်ပျူတာအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖိုင်ဖျက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်သန့်ရှင်းရေး၊ အမြဲတမ်းဖျက်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အောင်မြင်သော system optimization နှင့် security program တစ်ခုဖြစ်သည်။ Windows PC အသုံးပြုသူများကို CCleaner အခမဲ့ (အခမဲ့) နှင့် CCleaner Professional (Pro)...
Rufus ဟာသေးငယ်ပြီးသုံးရလွယ်ကူပြီးအခမဲ့ bootable USB disks များကိုဖန်တီးပေးသော program တစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်သင်လိုအပ်လျှင် - သင်၏ကွန်ပျူတာကို format ချပြီးသောအခါ ISO image file ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ operating system ကို USB မှတ်ဉာဏ်မှတစ်ဆင့် install လုပ်မည်။ ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်မရှိဘဲအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါက။ အကယ်၍ BIOS (သို့) DOS...
IObit Driver Booster 8 သည်အခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးယာဉ်မောင်းများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဒရိုင်ဘာများအားအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်မရှိဘဲဒရိုင်ဘာများကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာများတွင်မကြာခဏကြုံတွေ့ရသော driver update...
Wise Memory Optimizer ဆိုသည်မှာသင်၏ system performance ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သင်၏ system ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်ပမာဏကိုရှင်းလင်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအခမဲ့အသုံးဝင်သော application ဖြစ်သည်။ သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လား၊ အပျော်တမ်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ Wise Memory Optimizer ၏ရိုးရှင်းသော interface ကို...
IObit Uninstaller သည်သင်လိုင်စင်ကုဒ်မလိုပဲသင်အသုံးပြုနိုင်သော uninstaller တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းများကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်အတွက် Windows PC အသုံးပြုသူများသည်အသုံးပြုနိုင်သည်။...
Digital Video Repair အက်ပလီကေးရှင်းကသင်၏ပျက်စီးနေသောဗီဒီယိုဖိုင်များကိုကလစ်အနည်းငယ်ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပျက်စီးနေသောကိရိယာတစ်ခုမှဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုသင်ပြန်လည်ရယူသောအခါသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ထားသောဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူသောအခါ၎င်းဖိုင်သည်ပျက်စီးသွားသည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။...
သေးငယ်ပြီးအားကောင်းတဲ့ program ဖြစ်တဲ့ WinUSB က bootable USB တွေပြင်ဆင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ၀ င်းဒိုးအမျိုးအစားအမှတ်တရများကိုကူညီရန် WinUSB ဖြင့်သင်၏အလုပ်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်လုပ်နိုင်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းသော interface ရှိပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော WinUSB သည်သင့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်သင်သုံးနိုင်သောစွမ်းအားပြည့် program တစ်ခုဖြစ်သည်။...
WD Drive Utilities သည်သင်၏ Windows အခြေခံစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သင်သုံးနိုင်သော disk manager အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ WD အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင်ထုတ်လုပ်ထားသော USB များသို့မဟုတ် FireWire သုံး၍ hard drives များတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သော WD Drive Utilities တွင်မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်ကိရိယာများပါရှိသည်။ ဤကိရိယာများမှတဆင့်သင်၏ hard disk...
Windows File Recovery ကို download လုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဟာ Windows 10 ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ free file recovery program ကိုရရှိသည်။ ဖျက်လိုက်တဲ့ဖိုင်တွေကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ဖို့နဲ့ Windows File Recovery ပရိုဂရမ်နဲ့ပျောက်သွားတဲ့ဒေတာကိုပြန်လည်ရယူဖို့ဆိုတာအရမ်းလွယ်တယ်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော (သို့) ဖျက်လိုက်သည့်ဓါတ်ပုံများ၊...
Magic Partition Recovery သည် FAT သို့မဟုတ် NTFS format ဖြင့်ဖျက်ထားသောဖိုင်များကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့်မရရှိနိုင်သည့် disk များနှင့်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းများမှဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ဖျက်ထားသောအခန်းကန့်များရှိသည့် disk တစ်ခုသို့မဟုတ်မကောင်းသောကဏ္withများပါသည့် hard disk တစ်ခုရှိပါကဤ...
Windows Repair Toolbox သည် ၀ င်းဒိုးစနစ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်လွယ်လွယ်ကူကူပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အခမဲ့ပြီးတပ်ဆင်မှုမရှိသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပျူတာသည်မကြာသေးမီကနှေးကွေးနေပြီးသူ၏စွမ်းဆောင်ရည်မှာအမြဲတမ်းကျဆင်းနေသည်ဟုသင်ခံစားရပါကသင်ဤစနစ်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်း၊...
Hit Master 3D: Blade Assassination သည်လှုပ်ရှားမှုရှိသည့်သူလျှိုရုပ်ရှင်ကားများကိုနှစ်သက်သူများနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောမိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Android ပလက်ဖောင်းအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သောဒေါင်းလုပ် ၁၀...
Crossfire: Survival Zombie Shooter သည် Android platform အတွက်သီးသန့်ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသောကင်မရာဂိမ်းကစားခြင်းသည် RPG နှင့် MMO ဂိမ်းသည် console အရည်အသွေးဂရပ်ဖစ်၊ အရည်ရူပဗေဒနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုများဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Crossfire: Survival Zombie Shooter သည် Google Play မှ Android...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် - Battle Combat သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့သောစစ်ပွဲများတွင်ပါဝင်သည်။ Android ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကစားသူသန်းပေါင်းများစွာကိုရောက်ရှိလာသည့်အွန်လိုင်း FPS ဂိမ်း Modern Ops သည်အခမဲ့ဖုန်းသေနတ်သမား FPS ဂိမ်း Fire Strike ကိုတီထွင်သူများ၏ Android ဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက်စစ်ပွဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍...
Contra Returns သည် Arcade ဂိမ်းများအတွက်အစဉ်လိုက်ဆွဲဆောင်သော Contra ၏ mobile version ဖြစ်သည်။ Tencent Timi စတူဒီယိုမှ Konami မှလိုင်စင်ဖြင့် Garena Indonesia မှထုတ်ဝေသောအရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဘေးဘက် scrolling လုပ်သည့်သေနတ်သမားနှင့်အခန်းကဏ္ playing မှကစားသည့်ဂိမ်း (rpg) ပါ ၀ င်သည့်ဂန္ထဝင်ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း။ Contra ပြန်လာကို...
Clan N သည်ယနေ့ခေတ် Arcade ဂိမ်းများနှင့်ဂန္ထဝင် Arcade ဂိမ်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသော beatem မိုဘိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး တည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ စစ်အနုပညာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းနှင့်ဤမော်ကွန်းတိုက်အငြင်းပွားမှုတိုက်ပွဲများအတွင်းရှိမြေယာများအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပါ။...
Apex Legends ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ သင် Titanfall ဂိမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိထားသော Respawn Entertainment မှပြုလုပ်ခဲ့သောမကြာသေးမီကကျော်ကြားခဲ့သောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သော Battle Royale စတိုင်ဂိမ်းတစ်ခုကိုသင်ရနိုင်သည်။ Respawn Entertainment သည် Infinity Ward မှထွက်ခွာသွားသော developer များမှတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Call of Duty series Call of Duty...
High Heels! သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်သင်ကဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသောဇာတ်ကောင်ကိုအစားထိုးသည်။ ၎င်းကို Android developer များမှ download5သန်းကျော်သာလွန်သောဂိမ်း developer က၎င်းကို အစဉ်အဆက်တွင်အကောင်းဆုံးဒေါက်မြင့်မားသောဂိမ်း” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ High Heels! ကို Google Play မှ Android...
PUBG: New State သည် PUBG Mobile2ကိုစောင့်မျှော်သူများအတွက်အသစ်သောစစ်တိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ Android နှင့် iOS မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများတွင် download စံချိန်တင်မှုကိုချိုးဖောက်ခဲ့သောတော်ဝင်တော်လှန်ရေး PUBG Mobile သည် PUBG Mobile2အစား PUBG New State အမည်ဖြင့်ပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့သည်။ PUBG မိုဘိုင်း PUBG အသစ် - ပြည်နယ်သစ်ကို Google Play မှ Android...